Ammuuraha Islaamka Iyo Takfiirka (Sheikh/ Dr Yusuf Al-Qardaawi) | Somaliland.Org
Ammuuraha Islaamka Iyo Takfiirka (Sheikh/ Dr Yusuf Al-Qardaawi)
August 29, 2009	Ammuuraha Islaamka Iyo Takfiirka (Sheikh/ Dr Yusuf Al-Qardaawi)
Diin ka-saaridda qofka Muslimka ah ma aha mid ugub ku ah umadda Islaamka, balse waxay inteeda badan soo if-baxday horraantii lixdameeyadii, markii uu madaxweyne Jamal C/nasir-kii Masar uu culimo fara badan oo ka tirsanaa Ururka Akhwaanul-Muslimiinka dalkaas uu ku ciqaabay xabsiyada dalkaas. Culimadaas, oo uu horkacayey Sayid Qudub, ayaa markii ay u dulqaadan waayeen jiidh-dilkii loo gaysan jiray, waxay fadwoodeen in dowladdii Jamal C/nasir ay ka baxday diinta Islaamka, waxaana la rumeysan yahay in fikirka takfiirku uu halkaas ka hana-qaaday, inkasta oo uu markii dambe ku fiday caalamka oo dhan.
Dadkii fikirkaas ka soo aflaxay waxaa kamid ah Dr. Ayman Al-Thawahiri ku xigeenka ururka Al-Qaacida, oo isagana siddeetameeyadii lagu jiidh-dilay xabsiyada dalka Masar.
Laakiin inta badan culimada Islaamka ayaa qaba in xanuun kasta oo loo gaysto qofka Muslimka ah ay adag tahay in qof kale oo haysta diinta Islaamka laga saaro diinta Alle.
Culimada badankood waxay qabaan in marka uu qofku ku dhawaaqo ashahaadada ama uu qofku ku dhashay diinta Islaamka in uu markaas si qumaati ah u soo galay xeyn-daabka Islaannimada, ayna adag tahay in ruux kale uu qofkaas afkiisa uga saaro diinta Islaamka.
Si kale haddii loo dhigo, culimadu waxay qabaan in Islaamidda iyo ka bixidda Islaamku-ba ay yihiin xidhiidh ka dhaxeeya shakhsiga iyo Alle.
Dr. Yusuf Al-Qaradaawi, waxaa lagu tiriyaa in uu kamid yahay culimada ugu aqoonta badan diinta Islaamka ee xilligan nool. Wuxuu yidhi qofka bani’aadamka ah isaga ayaa naftiisa u doorta iimaanka. Haddii uu jiro buu yidhi wax ku khasbay, ma ansaxayo iimaankaas.
Dr. Qaradaawi wuxuu intaas raaciyey: “Asalka iimaanku waa midka qalbiga.” Sidaas daraaddeed, Sheekhu wuxuu qabaa in qof kale aanu ogaan karin waxa ku qarsoon qalbiga qofka kale.
Islaannimada iyo Shahaadada
Wuxuu tusaale u soo qaatay saxaabigii Usama Ibn Zayd, ee isaga oo Jihaad ku jira dilay nin ay iska soo horjeedeen oo markii uu seefta u baaciyey ku dhawaaqay Shahaadada.
Dhacdadaas markii loo sheegay nabi Muxammad, NNKH, si weyn ayuu uga dhiidhiyey, isagoo wajigiisuna uu gaduutay. Wuxuuna nabigu weydiiyey saxaabigii Usama Ibn Zayd: Maxaad ka yeeli doontaa kalimada Shahaadada marka lagu horkeeno maalinta aakhiro?
Sheikh Qaradaawi wuxuu yidhi: tusaalahaasi waa midka ugu weyn ee caddeynaya in Shahaadadu ay tahay Albaabka laga soo galo xayndaabka Islaamka, kaas oo haddii aanu qofku ka laaban Shahaadada aan marnaba la gaalayn karin ayuu yidhi. Wuxuu Sheekhu yidhi: gaalnimadu waa shay ka soo horjeeda iimaanka.
Sheikh Yusuf Al-Qaradaawi waxaa la weydiiyey sida uu uga jawaabayo aayado fara badan iyo axaadiis aan tiro yarayn oo muujinaya in qofku uu diinta uga bixi karo haddii uu tusaale ahaan salaadda ka tago?
Dr. Qaradaawi wuxuu yidhi: diin-ka-baxa lagu sheegay lafdiga aayadahan looma jeedo kii looga baxayey gabi ahaan diinta. Laakiin waxaa loola jeedaa in dadka lagu cabsiiyo, looguna gooddiyo in ku dhicidda dambiyada waaweyn, sida gogol-dhaafka iyo cabidda khamrada in ay horseedi karaan diin-ka-bixii weynaa.
Sheekhu wuxuu soo daliishaday xadiis odhanaaya qofka Muslimka ahi ma gogol-dhaafo, khamrana ma cabbo isaga oo iimaankiisu uu dhameystiran yahay. Waxaa xadiiskaas lagala dhex bixi karaa buu yiri in qofka Muslimka ah uu iimaankiisa is-dhimi karo, balse taas macneheeda ma ahan gaalnimo soo mutaxan.
Takfiir: Aalad siyaasadeed
Fikirka diin iska saaridda ayaa sanadihii ugu dambeeyey noqday aalad siyaasadeed oo ay isticmaalaan qaar kamid ah urur-diimeedyada ka jira caalamka Islaamka ee ku kacsan dowladaha dalkooda. Somalia ayaa kamid ah dalalkaas.
Sheikh Qaradaawi waxaa la weydiiyey sida looga hortagi karo mushkiladda takfiirka ama diin ka saaridda qofka Muslimka ah. Wuxuu yidhi ma ahan mid xabbad ama xabsi ama xeelad kale lagu dabiibi karo.
Dr. Qaradaawi wuxuu yidhi: “Waxaa lagu dabiibi karaa caddayn iyo daliil ku saleysan diinta Islaamka. Fikrad waxaa lagula diriraa fikrad kale.”
Sheikh Qaradaawi oo la weydiiyey waanada uu usoo jeedin lahaa kooxaha dadka Muslimka ah diinta ka saara, wuxuu aad uga digay mayal-adaygga iyo in diinta Islaamka mar walba laga eego dhanka adag, iyada oo la iska indha tirayo qaybta raxmaddu ku dheehan tahay.
Dr. Qaradaawi wuxuu leeyahay: “Mayal-adeygga iyo ku fogaanshaha diinta waa wixii halaagay umadihii hore, haddana halaagaya, mustaqbalkana halaagi doona.” Wuxuuna taas usoo daliishaday xadiis taas ka digaya.
Culimada Islaamka ayaa isku raacsan yihiin in qofka soo gala xayndaabka Islaamka, aanay sinnaba u bannaaneyn in dhiiggiisa lagu xalaaleysto, iyada oo diinta laga saarayo. Waxay kale oo isku raacsan yihiin in diin ka saariddu ay iyaduba tahay dambi weyn oo kooxaha ku shaqaystaa ay ku cadaab mudanayaan.
Posted by: Osman Abdillahi Sool……Freelance journalist. This entry was posted in Other. Bookmark the permalink.	Comments are closed.